China Model: JM340UE-100Hz factory na ndị nrụpụta | Ngosipụta zuru oke
Nlele Nlele Ọha
Metdị 4K Metal
4K Plastic usoro
MM27 usoro curved
YM32 Usoro curved
Ihe ngosi Ultra QHD (3440 * 1440) na-akwado nkwado nke ọma site na ngwa ngwa ngwa ngwa 100hz na-agba ọsọ iji hụ na usoro na-agagharị ngwa ngwa pụtara dị nwayọ na nkọwa zuru ezu, na-enye gị mgbakwunye ahụ mgbe egwu egwuregwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.
Zitere anyị email Akwụkwọ ntuziaka
34 "IPS panel na 3440x1440 Ultra QHD Mkpebi
Oge nzaghachi OverDrive 6ms (GTG) na 100Hz Nwee Ume Ọhụrụ
Display Port + 2 x HDMI + USB (FirmWare naanị) njikọ
PIP / PBP akwadoro
Enweghị nsị ma ọ bụ ịkwa ákwá na AMD FreeSync Technology
Teknụzụ Ọnọdụ Blue
Gịnị bụ ume ọhụrụ?
Ihe mbu anyi kwesiri ikwuputa bu “Gini bu ezi ume? Ọ dabara nke ọma na ọ bụghị dị mgbagwoju anya. Ume ume ọhụrụ bụ naanị ọnụọgụgụ oge ngosi gosipụtara ume ọfụma ọ na-egosi kwa nkeji. Can nwere ike ịghọta nke a site na iji ya tụnyere ọnụego ya na fim ma ọ bụ egwuregwu. Ọ bụrụ na agbagburu ihe nkiri na okpokolo agba 24 kwa nke abụọ (dị ka ọkọlọtọ sinima), mgbe ahụ isi ọdịnaya na-egosi naanị onyonyo 24 dị iche iche kwa nkeji. N'otu aka ahụ, ihe ngosi nwere ọnụego ngosi 60Hz na-egosi 60 "okpokolo agba" kwa nke abụọ. Ọ bụghị n'ezie okpokolo agba, n'ihi na ngosipụta ahụ ga-enye ume 60 ugboro nke abụọ ọ bụla ọbụlagodi na ọ bụghị otu pikselụ gbanwere, na ngosipụta ahụ na-egosi isi iyi nri ya. Otú ọ dị, ntụnyere ahụ ka bụ ụzọ dị mfe iji ghọta isi ihe dị n’ozi ume ọhụrụ. A elu ume ọnụego Ya mere pụtara ikike ijikwa a elu etiti ọnụego. Naanị cheta, na ngosipụta ahụ na-egosi isi iyi a na-enye ya, yabụ, ọnụọgụ ume dị elu nwere ike ọ gaghị akwalite ahụmịhe gị ma ọ bụrụ na ọnụego ume gị adịla elu karịa ọnụego nke isi mmalite gị.
Gịnị mere o ji dị mkpa?
Mgbe ijikọ ihe nlere gị na GPU (Graphics Processing Unit / Graphics Card) nyocha ahụ ga-egosipụta ihe ọ bụla GPU na-ezigara ya, na etu ọ bụla ọ zigara ya, na ma ọ bụ n'okpuru oke ogo etiti nke ihe nlele ahụ. Ọnụ ọsọ ọsọ na-enye ohere ịmegharị ọ bụla na ihuenyo ka ọ dị nwayọ (Fig 1), na-ebelata ngagharị ngagharị. Nke a dị ezigbo mkpa mgbe ị na-ekiri vidiyo ngwa ngwa ma ọ bụ egwuregwu.
Ume ume na Gaminggba Cha Cha
Egwuregwu kọmputa na-asụgharị egwuregwu vidio niile, agbanyeghị ikpo okwu ha ma ọ bụ eserese ha. Ukwuu n'ime (karịsịa na PC n'elu ikpo okwu), na okpokolo agba na-gbụsara ọnụ mmiri dị ka ngwa ngwa dị ka ha nwere ike site, n'ihi na nke a na-asụgharịkarị ka a mụrụmụrụ na nicer gameplay. A ga - enwe obere oge n’etiti etiti etiti nke obula ma yabụ belata lag lag.
Nsogbu nwere ike ịpụta oge ụfọdụ bụ mgbe a na - emefe okpokolo agba karịa ọsọ karịa ngosipụta ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ngosipụta 60Hz, nke a na-eji egwu egwu na-enye okpokoro agba 75 kwa nkeji, ị nwere ike ịnweta ihe a na-akpọ "ịkwa akwa ihuenyo". Nke a na - eme n'ihi na ngosipụta, nke na - anabata ndenye site na GPU na obere oge, nwere ike ijide ngwaike n'etiti etiti. Nsonaazụ nke a bụ ịkatọ ihuenyo na njakịrị, mkpagharị na-enweghị isi. Ọtụtụ egwuregwu na-enye gị ohere ịghachite ọnụego gị, mana nke a pụtara na ị naghị eji PC gị ike ya niile. Kedu ihe kpatara iji mefuo nnukwu ego na ngwa kachasị dị ka GPUs na CPUs, RAM na SSD draịva ma ọ bụrụ na ị ga-ejide ikike ha?
Gịnị bụ ihe ngwọta nke a, ị nwere ike ịnọ na-eche? Ume ume di elu. Nke a pụtara ma ịzụrụ 100Hz, 144Hz ma ọ bụ nyocha kọmputa kọmputa 165Hz. Nwelite site na 60Hz ruo 100Hz, 144Hz ma ọ bụ 165Hz bụ ọdịiche pụtara ìhè. Ọ bụ ihe ị ga - ahụrịrị n'onwe gị, ị nweghị ike ime nke ahụ site na ịlele vidiyo ya na ngosipụta 60Hz.
Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ bụ nkà na ụzụ ọhụrụ na-ada ụda nke na-aghọwanye ewu ewu. NVIDIA kpọrọ G-SYNC a, ebe AMD kpọrọ ya FreeSync, mana echiche bụ isi bụ otu. Ngosipụta nke nwere G-SYNC ga-ajụ kaadị ndịna eserese etu o si na-ewepụta ngwa ngwa na ngwa wee gbanwee usoro ume ọhụrụ etu o kwesiri. Nke a ga - ewepu ihicha ihe ngebichi na ntaneti obula rue ngbanye ume kacha nke nleba anya. G-SYNC bụ teknụzụ nke NVIDIA na-akwụ ụgwọ ikike ikikere dị elu maka ya yana ọ nwere ike itinye ọtụtụ narị dollar na ọnụahịa nke ileba anya. FreeSync n'aka nke ọzọ bu teknụzụ mepere emepe nke AMD nyere, ma na-agbakwunye obere ego na ihe nlele ahụ. Anyị zuru okè Display wụnye FreeSync na niile nke anyị egwu egwuregwu Monitors dị ka ọkọlọtọ.
Ekwesịrị m ịzụta G-Sync na FreeSync dakọtara monitorgba Cha Cha Monitor?
N'ikwu okwu n'ozuzu, Freesync dị oke mkpa maka ịgba egwu, ọ bụghị naanị iji zere ịkwa ákwá kama iji nweta ahụmịhe zuru oke. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ngwaike egwu egwu nke na-ewepụta karịa okpokolo agba karịa ihe ngosi gị nwere ike ijikwa.
G-Sync na FreeSync bụ ihe ngwọta nye nsogbu abụọ a site na ịnweta ngosipụta ume n'otu uzo ka eserese gosipụtara site na eserese eserese, na-eme ka ịgba chaa chaa na-adịghị mma.
Kedu ihe bụ HDR?
Ngosipụta dị elu (HDR) na-emepụta ọdịiche dị omimi site na ịmaliteghachi ihe ọkụkụ dị elu dị elu. Ihe nyocha HDR nwere ike ime ka isi ihe dị ka ihe na-enwu gbaa ma nyefee onyinyo ndị ka baa ọgaranya. Kwalite PC gị na ihe nlele HDR kwesịrị ya ma ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu vidio na eserese dị elu ma ọ bụ na-ele vidiyo na mkpebi HD.
N’etinyeghi na teknuzu nkọwapụta, ihe ngosi HDR na - ewepụta ihie na ụcha dị ukwuu karịa ngebichi wuru iji zute ụkpụrụ ndị okenye.
Oge Nzaghachi Ọsọ na-ebelata ghosting & blurring mgbe transitioning pikselụ, na-edebe ndị iro na teren kpomkwem na-elekwasị anya n'oge keogbaaghara oge.
Akwụkwọ ikike & Nkwado
Anyị nwere ike inye 1% akụkụ ahụ mapụtara (ewepu panel) nke ileba anya.
Zuru okè Display si akwụkwọ ikike bụ 1 afọ.
Maka ama ndị ọzọ gbasara akwụkwọ ikike banyere ngwaahịa a, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Nlereanya: JM27-165Hz
Osote: Nlereanya: PM27B-Q165Hz
4K metal Series UHDM553WE
CCTV nyochaa QA270WE
CCTV nyochaa PM270WE
Zuru okè Ngosipụta Technology Co., Ltd.